लोकतन्त्रमा लोक नै भूमिकाविहीन « Nepali Digital Newspaper
लोकतन्त्रमा लोक नै भूमिकाविहीन
६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०५:०८
संसद् विघटनले पैदा गरेको विवादले केही प्रश्नहरू जन्माएको छ । विगत तीस वर्ष अवधिमा सबैखाले अगुवाहरूले प्रजातन्त्र फलाकी रहे । त्यो आफैंले फलाकेको प्रजातन्त्र पनि ठिक लागेन अर्को न्वारन गरियो लोकतन्त्र भनेर । त्यो पुनर्स्थाापना भएको दाबी गरियो । त्यसभन्दा पहिलेको २९ वर्ष ४ महिनालाई तानाशाही भनियो । त्यसलाई सामन्ती भनियो, कालो युग भनियो । त्यो कालखण्डलाई गाली गरेपछि विलोमको रूपमा यो कालखण्ड आफैं प्रजातन्त्र भयो, लोकतन्त्र भयो । सामन्ती भएन, उज्यालो युग भयो । तर अहिले फेरि ताजा जनादेश लिने कुरा प्रतिगमन भएको छ । अर्थात्, लोकतन्त्रमा लोक नै भूमिकाविहीन पार्ने प्रयत्न हुँदैछ । चाहे अभिप्राय जे होस् तर जनतालाई एकपटक फेरि भूमिका दिन खोजिएको कुरालाई रोक्न प्रयत्नरत छन् र भन्दैछन्–निर्वाचन प्रतिगमन हो !
अर्थात् यो दलतन्त्र, अझ भनौँ हातका औंलामा गन्न पुग्ने केही नेताका हैकमलाई प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भनिनुपर्छ, अग्रगमन भनिनु पर्छ ! अनि आफ्नो यो अधिकार प्रयोगको विरोधमा जनता आफैं सडकमा निक्लनुपर्छ । भन्नुपर्छ– पाँच वर्ष भन्दा पहिले हामीलाई मतदान गर्ने सजाय नदेउ । यो कस्तो आग्रह हो, कस्तो हैकम हो ? जनताले केही थान नेताहरूलाई आफ्नो विधाता, मालिक, ख्वामित मानिदिनु पर्ने ? अनि यो मनाउन विगतका लब्धप्रतिष्ठहरू नै चोरऔंला ठड्याउँदै कुर्लनु पर्ने ? अर्थात् यो संविधानले गरेको शासन व्यवस्था र त्यसलाई थाम्न बनाएको संस्थामाथि नै प्रहार गर्ने काम भएन र ?
अनि यसलाई संविधानको रक्षा भन्नु कतिसम्म ठिक हो ? लोकतन्त्र यदि ठोकतन्त्र वा जोकतन्त्र होइन भने भनुन्, दलहरूको उच्चस्तरीय समितिले पनि कुनै निर्णय गर्ने अधिकार शीर्ष नेतालाई दिन्छ भने त्यो लोकतन्त्र हो कि तानाशाही ? लोकतन्त्रमा त निर्णय गर्ने अधिकार नागरिकको हैन ? हो यो अधिकार प्रयोगको विभिन्न तरिका हुन सक्छ, तर अधिकार शीर्षस्थ नेताको हैन नागरिकहरूको हो ।
यहाँ जनता शब्द प्रयोग नगरेर ‘नागरिक’ प्रयोग गरिएको छ । किनभने, जनता र नागरिक समानार्थी शब्द होइनन् । जनता अमुर्त नागरिकहरूको समुह हो जसलाई जसले पनि आफ्नो मर्जीले जनताको मर्जी हो भन्छ । जनताको सामुहिक परिचय त होला तर सम्बोधन गर्न सकिने परिचय हुँदैन । नागरिक त्यही जनताको सबैभन्दा तल्लो आधारभुत एकाई हो जसको परिचय सम्बोधन गर्न सकिने हुन्छ ।
दलहरूले यस्तै जनताको प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गर्छन् । जनता एकाई हैन एक अमुर्त अवधारणा मात्र हो त्यसैले उनीहरू आफ्नो काम, लोभ, लालसा सबैलाई जनताको टाउकोमा थोपरिदिन्छन् । मध्यकालमा यस्तो कुरा कसै न कसैको नाममा थोपरिन्थ्यो । चाहे प्रजातान्त्रिक चेतना होस वा साम्यवादी चेतना दुवैले यसलाई नागरिकमाथि गरिएको बलजफ्ती माने । त्यसैलाई समाप्त पार्न लामो सङ्घर्ष चल्यो, वैचारिक तथा रक्तरञ्जित दुवै । त्यसले स्थापना गरेको प्रजातन्त्रमा व्यक्तिको सर्वोच्चता, र साम्यवादमा सर्वहाराको सर्वोच्चता हो । यो नै अहिले दलतन्त्रले आफूलाई भन्ने गरेको लोकतान्त्रिक पद्धति हो । तर कुनै पनि दलमा, दलका नेताहरूमा, दलका कार्यकर्ताहरूमा लोकतन्त्र भन्न सुहाउने कुरै छैन । अर्थात् जुन गोरुको सिङ छैन त्यसकोे नाम तिखे !
नागरिकको सर्वोच्चता भनेको निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको संलग्नता हो । तर कुन त्यस्तो दल छ जसले नियमित उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेको होस् ? बल्लबल्ल बसेको बैठकमा पनि वार्तालाप हुन्न एकालाप हुन्छ । अर्थात् सदस्यहरूले एकसरो बोल्छन् । अनि अन्तमा नेताले आफ्नो मर्जीको कुरा पारित भयो भनेर हैकम चलाउँछ । यसमा यो दल वा त्यो दल भन्ने कुरै छैन ।
मुलुकको सर्वोच्च विधायिकामा हुने छलफल हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि समय तोकेर एकालाप नै हुन्छ । तर्कवितर्क, छलफल गरेर निर्णय हुने कुरा त सम्भव नै छैन । ध्वनीमतले प्रस्ताव पारित हुन्छ । अर्थात् अध्यक्षता गर्नेले जसको स्वर ठूलो सुनिएको ठान्छ त्यही पारित हुन्छ । उसै पनि जनताका प्रतिनिधि भनेकाहरू दलको कोर्राको डरले मतदान गर्छन् । कोर्रा शब्द कडा लागे ह्वीप भन्नुस् अङ्ग्रेजीमा ह्वीप नेपालीमा कोर्रा । त्यसैले जुन व्यवस्था वास्तवमा नेतातन्त्र हो अलि उदार भन्ने हो भने दलतन्त्र हो त्यो आफूलाई प्रजातन्त्र भन्छ । भएन त सिङ नभएको तिखे गोरु ?
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२३ फाल्गुण २०७७ आइतबार, ७ मार्च २०२१)